Jaal Lammii Beenyaa fi Jaal Daawwit Abdataa mana hidhaa keessaa dhabamsiifaman. – Kichuu
[SQ Adoolessa 12/2021]
Qondaalonni ABO Jaal Daawwit Abdataa fi Jaal Lammii Beenyaa mana hidhaa magaalaa Mojoo kan turan guyyaa har’aa (Adoolessa 12/2021) maatiin isaanii dubbisuuf deemanii akka dhaban odeeffanneerra.
Qondaalonni ABO kun lamaan manni murtii waliigala Oromiyaa bilisaan erga gadhiisee booda abbaan alangaa Federaalaa ol iyyannoo fudhatee ture. Manni murtii Federaalaas murtiin mana Mana Murtii Waliigalaa Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa-Supreme Court of Oromia akka kabajamu murteessee akka gadi dhiifaman ajajee ture. Haata’u malee, poolisiin isaan to’atee jiru “ajaja qaama olii” eegba jechuudhaan gadhiisuu didee turse. Amma mana hidhaa Mojootii baafamanii eessa akka geeffaman hin beekamne.
Jaal Geetaachoo Iddoosaa hiikkamera. Baga Maatiikeetti deebite, waan biraa waan jennu hin qabnu.
Jaal Geetachoon umrii daa’imummaa irraa kaase nama diinaan falmaa guddaateefi yeroo garaagaraatti dararaa hidhaafi reebbicha suukkaneessaan Kachallee Amboo, Maa’ikalaawwii hanga qaallittiitti irratti wal furaa ture.
Goota qaroo ija uummataa kanaaf hidhaan hin maluuf badhaasatu malaaf. Amma waan hundaafuu baga nagaan maatii keetti dabalamte. Kanneen akka hidhamuu isaa dhageessaniin kallattii hundaan dirmannaa Sagalee taataniif galatni keessaan Bilisummaa haata’u. Adeemsi waliif dirmachuu kun jabaatee itti fufu qaba.
Jaal Nadhii Gammadaa fi hayyoonni Oromoo hedduun mana hidhaa Addagiraat keessatti akka argaman beekame ODUU…
Qophii oolmaa waraana bilisummaa Oromoo jaal Galmoo fi jaal Mancaasiin dhihaatu caqasaa. Akkasumas walaloo jaal…